NOOCYADA CRASSULA IYO SHARRAXAADKOODA - DHIRTA GUDAHA
Noocyada ugu badan ee gabdhaha baruurta ah
Haweeneyda baruurta ah, ama xajin, waa caleemaha dhirta suubban ee qoyska Crassulaceae, oo mideynaya qiyaastii 350 nooc oo koraya Afrika, Madagascar, iyo koonfurta Carabta. Noocyo badan oo Crassula ah ayaa lagu koray dhirta gudaha ah waxaana lagu caanbaxsan yahay magaca "geedka lacagta". Geedaha ayaa magacan ku helay sababtoo ah caleemaha, taas oo qaabkoodu u eg yahay qadaadiicda.
Dhamaan wakiilada Crassula waxay gabi ahaanba kala duwan yihiin muuqaalkooda, waxayna ku xiran yihiin nooca iyo kala duwanaanta, laakiin dhammaan noocyada geedaha lacagta ah, qaabka ka soo horjeeda ee caleemaha ee asliga ah iyo yaraanta kala-gooyaha saxanka cagaarka ah ayaa weli ah. Ubaxyada ubaxa waxay yeelan karaan midab kala duwan, laakiin waxay ku yar yihiin cabbirka iyo inta badan ee inflorescences ee qaababka kala duwan. Tirada stamens waxay u dhigantaa tirada xayawaanka.
Waa muhiim! Caleemo qandhadu waxay ka kooban tahay arsenic, sidaas darteed cunto cunid waa khatar.
Tixgeli nooca jajabku leeyahay noocyada iyo noocyada. Noocyada ugu caansan ee geedaha duurjoogta ah, oo lagu kobciyo xaaladaha gudaha, waxa loo qaybin karaa saddex kooxood: geedka, daboolka dhulka (huuri) iyo cinjir.
Kooxdani waxay isku daraysaa noocyada gabdhaha baruurta leh magacyo kala duwan oo lagu koray guriga, gaar ahaan, si loo abuuro bonsai.
Noocidda ovoid dufan (or oval) ee ka timaadda Koonfur Afrika waa dhir geedeed ilaa 1.8 m oo sarreeya Caleemaha waa mid qaro badan, badan, awood u leh inay hayso qadar badan oo qoyaan. Qaabkoodu waa jajab-qaabeeya, dusha sare waa mid aad u iftiimaya, marmarka qaarkood waxa laga yaabaa in la helo cirbadeyn guduudan. Cuncunku waxay leexiyaan wakhti ka dib waxayna soo noqdaan bunni. Geedka ubaxeedka xilliga dayrta iyo jiilaalka. Ubaxyada waa mid yar, midab-stared-iyo qaab-casaan-casaan. Warshadu waxay u adkeysan kartaa heerkulka aan ka hooseyn sagaal digrii iyo dhicis gaaban oo muddo gaaban ah. Dhammaan noocyada ovoid dufanka ah waxay ku kala duwan yihiin cabbirka ama hooska caleenta caleen. Dusha sare ee caleemaha waxaa lagu dabooli karaa dhibco dhalaalaya, taas oo ah ovalaha oogada loo yaqaan 'Crassula oval' mararka qaarkood loo yaqaan 'Crassula Silver'. Badanaa waxaa sidoo kale laga helay magaca "portulakovaya"; waxaa lagu gartaa joogitaanka xididada anteenada on jirida geed. At guriga, geedka aan la qabin. Waxay jeceshahay badan oo iftiin iyo nadiif ah waraabinta. Ubaxku wuxuu si toos ah ugu xiran yahay iftiinka geedka. Iyadoo la'aanta iftiinka ay lumiso kartidooda kartida.
Ma taqaanaa? Crassula waxaa la aaminsan yahay in ay sameysey naftaada jawi deggan tamareed. Intii ay ku sugnayd guriga, farxadkiisu ma baxayso. Wuxuu nadiifiyaa guriga tamarta taban, wuxuu abuuraa niyadda wanaagsan, wuxuu nadiifiyaa fikradaha.
Noocyada caadiga ah:
"Heshiiska Crosby" - Warshad qunyar socod ah oo leh caleemo yaryar oo dhererkiisu yahay 1.5 cm oo dheer iyo illaa 1 cm ballaaran, cagaar mugdi ah oo midab leh, oo isku dhinac ah oo leh xuduud guduudan. Jirrada yaryar waa mid adag, cagaaran midab, laakiin waqti ka dib waxay noqotaa qoryo. Kala duwanaantani waxaa badanaa loo adeegsadaa beeraha yaryar iyadoo ay ugu wacan tahay cabbirka yar.
"Hobbit" - kala duwanaanta kala duwan ee loo yaqaan 'hybrid bred' ee 70s ee qarnigii labaatanaad. oo ku taala Maraykanka oo ku yaala adoo ka gudbaya Ovata-da iyo Gonzon (C. Lactea). Ciriiri ee foomka asalka ah ee saxanka warqadda. Waxaa loo soo jeestay oo laga soo qaaday saldhigga ilaa bartamaha. Cidhifyada caleemaha qaarkood waxay noqon kartaa mid casaan ah midabka cas.
"Hummel ee Sunset" - Muuqaal kala duwan oo kala duwan oo kala duwan waa midabka caleenta. Mindhada dhuuban waxay leeyihiin xargo cad ama huruud ah oo leh xuduudda cas ee loo yaqaan. Si ay midabada madaxbannaan ee caleenta ah looma lumin wax soo jiidasho leh, waa in dhirta ay siisaa iftiin aad u iftiin leh. Haddii aysan jirin iftiin ku filan, Crassula waxay bedeshaa midabka caleenta cagaarka.
Mid ka mid ah noocyada mashiinka caloosha ah waa qaabka loo yaqaan (Ovata var Obliqua). Foomkani wuxuu ku kala duwan yahay in uu tilmaamey caleemaha saddex geesood ee cabbirka weyn oo ka badan kan haweenka dufanka leh ee caadiga ah. Caleenta dhinaca dhinac kasta ah ayaa hoos u dhacaya, caaraddiisa waa la kiciyaa. The ugu caansan yihiin laba noocyo kala duwan oo qaabka Crassula qaab:
"Tricolor" - Warshad leh dhar cad iyo cagaar guduudan oo ku wareegsan caleen caleen. Nambarka cad iyo goobta qoryaha waa la waayay. Marka caleemaha cagaaran u muuqdaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro, tan iyo dhirta ay lumiso kala duwanaansho madaxtooyada.
"Solana" - noocyo kala duwan oo la mid ah kii hore, laakiin leh jilbaaxo jaale dhalaalaya.
Waa muhiim! Markuu koro, geedku wuxuu u baahan yahay in la sameeyo. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu rido burooyinkeeda in ay koraan inta u dhaxeysa labada caleemo. 2-3 burooyinkooda cusub ayaa ka muuqan doona meeshan, geedkuna waa laanta. Xoqidda waa in lagu sameeyaa 3-4 caleemo midab leh.
Waxay caan ku tahay noocyada waaweyn. Caleemaha waxaa lagu daboolaa lakabyo madow, waxay leeyihiin qaab ku dhawaad ​​wareegsan. Mindhada caleen waxay leeyihiin midab cagaaran-buluug ah, xuduudda cas ee sare iyo midab guduud ah oo hoose. Cabbirkoodu waa ilaa 7 cm oo dherer ah iyo 5 cm width. Geedka guriga wuxuu ku kori karaa ilaa 1.5 mitir. Marka la barbardhigo Crassula Ovata, Crassula Treelike ayaa ah mid ku haboon daryeelka. Warshadu waxay u baahan tahay iftiin fiican iyo waraabin habboon oo aan biyuhu dhicin. Noocyada dhirta Crassula waxaa ka mid ah foomamka leh magacyada soo socda:
Krassula undulatifolia (C. arborescens undulatifolia) - sifooyinka kala duwan ee warshadda waa cidhiidhi, illaa 3 cm, caleemo lacag ah oo buluug-buluug ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo casaan ah iyo xargaha cad ee caleemaha caleen.
Crassula Curly (C. arborescens curviflora) - Magaciisa ayaa ka helay caleemo caleen ah oo weyn.
Daboolka dhulka (gurguurashada) Crassulas
Qoyska caan ah oo ka mid ah kooxda caanka ah ee floriculture ayaa ah haween dufan leh. Waxay afkoda yihiin dhuuban, qoyan, si dhakhso ah u koraan oo daboolo ciidda leh rooga. Badanaa waxaa loo isticmaalaa geedka dhoobada.
Crassula Ply-shaped (C. lycopodioides)
Plageuvidnaya plyadyanka waxay leedahay qaab ah geedo yar yar oo aan ka badnayn 25 cm oo sarre leh caleemaha qoyan ee tufaaxa tufaaxa, dushooda kuwaas oo yar yar kora. Muuqaal ahaan waxay u egtahay naas, sidaas darteed waxay heshay magac noocaas ah. Caleemaha qaabka miisaanka yar ayaa lagu daboolaa afar saf oo si habboon u dheji jirridda iyo midba midka kale. Iyada oo iftiin leh, waxay helayaan midab casaan ah. Dhirta uma baahna inay daryeelto, waxay yareysaa shooga waxayna leedahay noocyo dhawr ah oo kala duwan qaabdhismeedka baadiyaha, caleemaha loo yaqaan 'bearberry caleemo' iyo leeyihiin magacyadooda. Mid ka mid ah foomamku waa xayeysiis dufan leh, oo dabeecaddiisa dabiiciga ah ay ka badan yihiin kuwa Crassula yihiin tubaako, oo ka baxaya yaraanta cadaadiska. Taarikada sambabadu way ka sii faafayaan oo waxay yeelan karaan midab kala duwan, midabo iyo midab jaalle ah, taas oo ku xidhan nooca Crassula.
Aragtida muuqaalka ah ee naqshadaynta caleenka leh caleen caleen ah ilaa 4 cm oo dherer ah iyo 0.4 cm qaro ah. Foomka, caleemaha waa styloid, fareeshka, meel u dhigma masaafo gaaban oo midba midka kale ah oo dhan.
Waa muhiim! Nidaamka xididka Crassula waa yar yahay, sidaas darteed dheryihii waa in la isticmaalaa oo hooseeya. Dheriga waa in uu ahaado lakab oo dheecaan leh.
Crassula Point (C. Sawirro)
Dhirta waxaa lagu kala gartaa qurxinta. Waxay leedahay hoy, caleemo adag oo xoog leh. Cabbirrada xaashida 1.5 cm oo dherer ah iyo 0.8 cm width. Caleenta cagaaran ee caleemaha waxaa lagu daboolay dhibco cas, iyo dhinaca dhinaca dambe - guduud-casaan. Dhinacyada geesaha waxaa la geliyaa cilia khafiif ah oo khafiif ah.
Koox ka mid ah gabdhaha baruurta leh qaab dhismeedka sawir aan caadi ahayn ayaa lagu magacaabay xajmiga xiiriirka. Caleenta warshadu waxay ku koraan saldhigeeda waxayna daboolaan asliga ah, abuurista saameyn sida haddii ay ku dhejiyaan. Geedaha waa kuwo aan qabyo ahayn isla markaana u muuqda mid wanaagsan.
Ma taqaanaa? Crassula wuxuu ka tagaa qarsoodi ah qaybo firfircoon oo firfircoon oo saameyn wanaagsan ku yeesha jidhka bini'aadamka waxayna leeyihiin saameyn bactericidal ah.
Crassula xayiray (hollowed) (C. perforata)
Warshad yar ayaa leh caleemo dhejis ah, oo ku yaalla lammaanaha iyo daboolaan asliga ah. Qorshaha caleemaha waa qoryaha. Isku dheji, adigu ma cidhiidhi. Caleemaha waxay leeyihiin cagaar cagaaran oo leh cirridka buluuga ah iyo xudduud cas oo ku wareegsan geeska. Dhirirka jirku waa ilaa 20 cm, iyo dhexroorka cawska leh caleemaha qiyaastiisu waa 3 cm. Waxaa jira noocyo oo caleemaha yaryar ay leeyihiin jilicsan jaale ah, iyo kuwa duqowda ah, ee hoose ee jirku, waa gebi cagaaran.
Krassula ayaa soo ururiyay (koox) (C. socialis)
Warshad hooseeysa sii kordhaysa oo leh khafiif ah, oo leh jajab ballaaran oo afkoda ah, kuwaas oo ah saldhigyo caleenta cagaaran. Caleemuhu waa yar yihiin, illaa 5 mm dheer, siman, flat, waxay leeyihiin qaab qaabaysan. Midabkoodu waa buluug-cagaar. Dhinaca geeska caleenta caleen waa ciliyoo khafiif ah. Geedku wuxuu si fiican u koraa, sameynta barkin cufan.
Crassula Broadleaf (dhagax) (C. rupestris)
Caleemaha dheeraadka ah wuxuu heystaa duurjoogta ama daaqadaha ilaa 0.6 m sare, caleemuhu waa cufan, siman, dheeman, ilaa dhererka 2.5 cm iyo 1-2 cm ballaaran. Dusha sare ee xaashidu waxay yeelan kartaa xargo guduudan. Sida aad u arki karto, dufanka - ma aha xannaaneyn caajis ah. Noocyo iyo noocyo kala duwan oo ah "geed geed" ayaa ah mid cajiib ah oo kaliya ma tagi doono si aan kala go 'lahayn wax dhirta.